Psychoholic ( 18+ ) - HannarHunnie - Wattpad
Psychoholic ( 18+ )
❤️ Psychoholic ❤️.
( English အဘိဓာန်မှာ မရှိတဲ့ psychoholic ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတာ ဇာတ်သိမ်းမှာပြောပြပါမယ်  .... thanks )
&quot; xiao လုပ်ငန်းစုသည် ယခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းစု ဆယ်စုတွင် နံပါတ်သုံးနေရာမှ ရပ်တည်လာကြောင်းသိရသည်  ကျွန်မက သတင်းကြေညာသူ kim sohee ဖြစ်ပါတယ်ရှင် &quot;
သတင်းပြီးတော့ sehun လည်း TV ပိတ်ကာ အိပ်ရာဝင်ခဲ့လိုက်သည် သူတစ်နေကုန် ဆေးရုံမှာ ပင်ပန်းခဲ့သမျှက အိပ်ရာထဲရောက်မှ သက်သာပြေပျောက်သွားသလို သူ့အတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံးနေရာသည် မကျယ်မဝန်းလပေးတိုက်ခန်းလေးထဲက သူ၏ အိပ်ရာ
မနက်မိုးလင်းထဲက ဆေးရုံမှာ လူနာတွေနှင့် လုံးပမ်းခဲ့တာ ပင်ပန်းခဲ့ပြီ  juty ရှိတဲ့ ညတွေ ဆိုပိုဆိုးသေးသည် ပင်ပန်းလွန်းသည် ဒါတောင် နယ်က သူ့အဖေနှင့် အမေကို ထောကိပံ့နေရတာနှင့် မလောက် စား၍သောက်၍ရနိုင်သည်ဆိုရုံ  ဘဝကချိုလား ခါးလား လာမေးသူရှိရင်တော့ အခါးတွေအများကြီးမှာ မဆိုစလောက်ကလေး အချိုပါသော ကော်ဖီတစ်ခွက်လို့တော့ပြောရမပေါ့
အချို?? အင်းး  အချိုနည်းနည်းလေးတော့ရှိသည် .... သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ချစ်သူ mie ကတော့ သူ့ဘဝကိုနားလည်သူဟုထင်သည် သူများတွေကတော့ mie ကို ဆို...
nae တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရေးနေပါတယ်  @luhunnie00  @bambi7
Get notified when Psychoholic ( 18+ ) is updated
❤My Naughty Bambi❤
Luhan _ soul who hasadead body . Although his mother and him died together in an accident , his soul hadn't died yet...
MyDevil U Can
Hunhan's stupid fanရူးသွပ်​​သောupdateများ
Dear....My Deer (18+)
Happy Ever After ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်မျိုးဟာ
&quot;ရူးပါ့ကွာ!!! မင်း ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်တာ သူမဟုတ်ဖူးကွ...သူ့အမွှာ&quot;
-Kim Jongin, Kim Taemin